लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना – नेपाल सरकार, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान
लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०२/०२
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान¸ भैसेपाटी¸ ललितपुर हाता भित्र रहेका भवन भत्काउदा निस्केको पुराना झ्याल¸ ढोका¸ चौकस¸ फलामे डण्डी¸ कुर्सी¸ खाट¸ च्यानल गेट¸ स्टील दराज¸ काठको दराज काम नलाग्ने भई लिलाम विक्रि गर्नुपर्ने भएकोले जे-जस्तो अवस्थामा रहेको छ¸ सोही अवस्थामा बढाबढ प्रकृयावाट लिलाम विक्रि गर्नुपर्ने भएकोले यो सूचना जारी गरिएको छ ।
इच्छुक वोलपत्र दाताहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले २१ औ दिनको कार्यालय समय भित्र रु. १०००/- (पछि फिर्ता नहुने गरि) अद्यावधिक / कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र¸ कर दर्ता प्रमाण पत्र¸कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र व्यक्तिको हकमा निवेदन र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी पेश गरी यस कार्यालय वाट वोलपत्र फाराम खरीद गर्न सकिनेछ ।
दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले २२ औ दिनको १२:०० बजे भित्र यस प्रतिष्ठानमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । यसरी म्याद भित्र दाखिला भएका बोलपत्रहरु सोही दिनको २:०० बजे बोलपत्रदाता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको रोहवरमा यस प्रतिष्ठान¸ भैंसेपाटीमा खोलिनेछ । बोलपत्रदाता वा निजका प्रतिनिधिहरु उपस्थित नभए पनि बोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।
वोलपत्र खरीद एवं दाखिला गर्ने अन्तिम दिन वा खोल्ने दिन विदा परेमा सो को लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन उक्त कार्य हुनेछ ।
बोलपत्र साथ बोलपत्रदाताले आफुले कवोल गरेको रकमको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने एकमुष्ठ रकम यस प्रतिष्ठानको कार्यालय कोड नं. २८/३७१/०३ मा को.ले.नि.का. ललितपुरको नाममा नेपाल वैंक लिमिटेड¸ ललितपुर शाखामा रहेको धरौटी खाता नं. ०१८०२००००००००३००००५१ मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर यस प्रतिष्ठानमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
बोलपत्रसाथ अद्मावधिक फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र¸ करदाता प्रमाणपत्र¸ करचुक्ता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी अनिवार्य रुपमा संलग्न गरेको हुनुपर्नेछ । व्यक्तिको हकमा निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
रित नपुगेको वा म्याद नाघी आएको तथा न्युनतम मूल्य भन्दा घटी अंकित भएको वा शर्त सहितको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा आंशिक रुपमा स्वीकृत गर्ने¸ अस्वीकृत गर्ने वा सूचना नै रद्द गर्ने अधिकार यस प्रतिष्ठानमा निहित रहनेछ ।
लिलाम गर्ने सम्पुर्ण सामानहरुको न्युनतम मूल्य रु.९¸२३¸५६५.९५ (अक्षरेपी रु नौ लाख तेइस हजार पाँच सय पैसठ्ठी रुपयाँ पन्चानब्बे पैसा मात्र) कायम गरिएको छ ।
सम्बन्धित इच्छुक व्यक्तिले लिलाम हुने वस्तु हेर्न चाहेमा तथा विस्तृत जानकारीको लागि यस प्रतिष्ठानको प्रशासन शाखामा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ ।
यस सूचनामा उल्लेख नभएका कुराहरु आर्थिक कार्यविधि नियमावली¸ २०६४ र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
प्रस्तुत विषयमा विस्तृत जानकारी यस प्रतिष्ठानको website: www.training.gov.np मा प्रकाशित छ¸ सो वाट जानकारी लिनुहुन वा फोन नं. ०१-५५९०८९४ मा सम्पर्क गरी बुझ्न सकिनेछ ।